Fiction/Poetry – Chakra Jwala
My own creations or Others’
Posted in Fiction/Poetry, Many More, Religion
प्रेमका प्रतीक भगवान कृष्णको नाममा लेखिएको एउटा प्रेम कथा
Posted on 25 Aug 2016 11 Feb 2017 by Chakra Bhandari
यसलाई एउटा सानो कथाबाट बुझाउने प्रयास गर्दैछु ।
प्रसङ् राधा-कृष्णको हो ।
…….जब कृष्ण गाई चराउन जंगलमा जान्थे, उनी एक सुरमा बाँसुरी बजाउँथे । बाँसुरीको प्रगाढ धुन जंगलको घनत्व चिर्दै राधाको घरसम्म पुग्थ्यो । जब उक्त धुन राधाको कानमा पुग्थ्यो, उनी अचेतझैंं बाँसुरीको धुनमा लठ्ठिदै जंगलमा पुग्थिन् । कृष्णको नजिकै पुगेर आँखा चिम्म गरेर धुन सुनिबस्थिन् । धुनसँगै राधाको आँखाबाट आँसु पनि बग्न थ्ााल्थ्यो । यो क्रम कहिलेकाहीँ घन्टौंसम्म चलिरहन्थ्यो ।
एक दिन कृष्णले राधासँग सोधे, ‘राधे, तिमी किन यसरी बेला-कुवेला यहाँ आउँछौ ? तिम्रो घरमा कति काम हुन्छ, सधैं यसरी आउनु राम्रो पनि होइन ।’
‘तिम्रो धुन सुनेपछि म अरू केही गर्नै सक्दिनँ । तानिँदै तिमी नजिक आइपुग्छु ।’ राधाले भनिन्, म तिम्रो धुनमा कसरी बाँधिन्छु, मलाई नै थाहा हुँदैन ।’
‘त्यस्तो के छ र मेरो बाँसुरीको धुनमा ?’
‘काले, तिमी यो प्रेम र यसको विरह कहिल्यै बुझ्न सक्दैनौ ।’ राधाले भनिन्, ‘त्यसका लागि तिमी नै राधा हुनुपर्छ ।’
‘अन्यथा नलेऊ राधे… ।’ कृष्णले हाँस्दै भने, ‘तिम्रो यो अवस्था देखेर मलाई रमाइलो पो लाग्छ । म तिम्रो यो भाषा बुझ्न असमर्थ छु ।’
‘हाँस र रमाइलो पनि मान ।’ राधाले रुँदै भनिन्, ‘कुनै दिन तिमीले पनि मैले जस्तै कसैलाई प्रेम गर्नेछौ अनि मात्र मेरो पीडा महसुस गर्नेछौ ।’
त्यसपछिको कथा त धेरैलाई थाहा छ । यो संवादको केही समयपछि कृष्णले बृन्दाबन छाडे । यसरी छाडे कि फेरी कहिल्यै फर्केर आएनन् । राधाले जीवनभर कृष्णलाई प्रेम गरिन् । कतिसम्म प्रेम गरिन् भने उनी जुन बाटोबाट गोकुल (राजधानी) गएका थिए त्यो बाटोमा उनले टेकेको एउटा पाइलामा उनले सधैं पूजा गरिरहिन् ।
एक दिन जब कृष्णले रुक्मिणीलाई भेटे, एक नजरमा कृष्णलाई प्रेम भयो, तर राधाले जुन प्रेम-प्यास उत्पन्न गराइदिएकी थिइन्, त्यो मेटिएन । जति-जति समय बित्दै गयो, कृष्णले विवाह गर्दै गए । जाम्बवती, सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रवृन्दा नाग्नजीति, सत्या, भद्राजस्ता अनेक नारी उनको जीवनमा आए तर उनको प्रेमप्यास तृप्त भएन । कतिसम्म भने उनले १६ हजार १ सय रुपसीसँग प्रेम गरेको प्रसङ्ग कृष्ण कथाहरूमा पाइन्छ । यति गर्दा पनि कृष्णले राधाको जस्तो भावपूर्ण प्रेम कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् । जीवनको अन्तिम क्षणमा धेरै पटरानीमध्ये कसैले कृष्णसँग सोधेकी थिइन्, ‘तपाईं आफ्ना रानीमध्ये कसलाई बढी माया गर्नुहुन्छ ?’ कृष्णले एकक्षण पनि नसोची उत्तर दिए- राधा । जवकी राधाले कहिल्यै कृष्णकी रानी हुने सौभाग्य पाइनन् ।
राधे, यो पारिलो मौसममा तिम्रो प्रेम कस्तो थियो होला भनेर कल्पना गरिरहेको छु । तिम्रो प्रेमपीडा महसुस गरिरहेको छु । ……..
Posted on 18 Jan 2016 11 Feb 2017 by rudrawationline
पानी परीरहेको, बाटो चिफ्लो थियो कुनै योजना बुनेर घरबाट हिँडे। केही दिनबाट केही कुराको फैसलामा म हिडीरहेको थिएँ। त्यो फैसला कुनै मुद्दाको होईन मायाको थियो। मलाई उसले माया गर्छे भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि फैसलाको आवश्यकताको महशुस गरेँ तर कहिल्यै पनि उसलाई सोध्न सकिन “तिमीले मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ” भनेर किनकि उसको नजरमा शंकालु हुनु थिएन। मलाई कहिलेकाहि शंका लाग्थ्यो, “कि म मात्रै प्रेम गरिरहेछु?” कुरा गर्दा पनि झर्को माने जस्तो महशुस गर्थेँ। पटक पटक यस्ता तनावहरु म सहन नसक्ने भएँ। मुटु पोल्थ्यो, खाना रुच्न छाडी सक्यो । लाग्थ्यो “ब्रेक नभएको गाडिमा यात्रा गरीरहेछु।”
अकस्मात एकदिन कसैको मुखबाट सुने, ऊ त चरित्र हिन मान्छे हो। अनि म पनि कठोर बनेर त्यो जोखिमपुर्ण यात्रालाई बिश्राम दिने चेष्टा गरेँ। फैसला उसको तर्फबाट होईन मेरै तर्फदेखी मैले नै उसलाई बोलाएर अन्तिम निर्णय सुनाएँ र उसको वास्तै नगरी उसको तनावबाट मुक्त भएर छुट्टै नयाँ जीवनलाई अगाडी बढाएँ। देखाउनु थियो उसलाई “ऊ बिना पनि रमाउन सक्दो रहेछु” भनेर।
करिव ४/५ दिन जति भएको हुँदो हो, चिया खाजाको लागी म एक होटलमा थिएँ, टेबुलको पत्रीकामा नजर पुग्यो। एउटा खवर शिर्षकमा टक्क आँखा पुग्यो, लेखेको थियो “घरमा बिवाहको दवाबले किशोरीले गरीन आत्महत्या” म झसङग भएँ! अनि हतारिदै पुरा खवर पढेँ। केहि छिनमै हतार हतार गर्दै उसको घरमा पुगेँ, मनमा एकप्रकारको डर थियो । जताततै सन्नाटा छाएको थियो, सबैको आँखामा आँसु थियो। कोहि कुरा गर्दै थिए, “दवाव दिएर घरकाले बिवाह गरिदिन ला’का, बिचरी मरिछ।” कसैले भन्दै थिए, “केटाले धोका दिएर यो बिजोग भएको हो ।”
म उसको घरमा गएँ उसको कोठामा एउटा पत्र भेटियो। पत्र पढेपछि रिँगटा लागेर त्यहि ढलेछु, प्रेशर कम भएको भन्दै उपचार पनि गराईयो तर निको भएन, पागल भएँ म, म कसैलाई मारेर खुसी साथ बस्न सक्दैनथे, यो सबै घटनाको कारक मै थिएँँ, म पनि सँसारमा बाँच्नै चाहिन।मेरो सबै बिगत एउटा नोटमा लेखेँ र एउटा कहालीलाग्दो भिरमा पुगेँ, त्यो पत्रिका नि त्यही संगै थियो। लेखेको थिएँ त्यसमा “सुधा, तिमी मैसँग सधै जिउने गरी आएकी रहिछौ, घरमा बिवाहको दवावलाई सहन नसकी मसंग आएकी रहिछौ तर मैले तिम्रा कुरै सुन्नै चाहिन, आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेँ। मेरो त्यो निर्णयले तिमी यो सँसारबाट बिदा लियौ। यो सबै घटनाको लागि म नै दोषी छु ।” त्यति लेखेपछि म पनि यो सँसारबाट बिदा मागेँ। ………………म झसङग झस्कीए! कति नराम्रो सपना देखेछु!
मेरो साथीले सुनाएको दुखत सपना😁
स्रोत: फेसबुक Khatara Dusman